Sideen u codsadaa lacag celin? : Dahabshiil Customer Portal
Sideen u codsadaa lacag celin? Print
Si aad u dalbato soo-celinta lacagtaada, fadlan u gudub boggayaga xiriirka http://www.dahabshiil.com/ oo buuxi foomka adigoo dooranaya xulashada "Dalbo soo-celinta", oo waxaan si dhakhso ah oga shaqeyn doonnaa codsigaaga oo aan arrinta u baari doonnaa.
Lacag celinta ayaa lagu bixin doonaa 72 saacadood gudahood marka codsigaaga la helo kadib waxaana laguu soo celin doonaa lacagtaada kaarka aad marka hore kasoo dirtay. Waanu kula soo socodsiin doonaa marka lacag celintaada la dhameystiro.
Kadib markii kooxdeenna ay baarto sababta dib-u-dhigista lacag bixintaada hore, waxaan kuu soo diri doonaa faahfaahinta natiijooyinkayaga.